Zinedine Zidane oo qiray inuu doonayo in Pepe uu sii joogo Real Madrid – Gool FM
Zinedine Zidane oo qiray inuu doonayo in Pepe uu sii joogo Real Madrid
Liibaan Fantastic January 3, 2017
(Madrid) 03 Jan 2017 Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa si cad u sheegay inuu doonayo in daafaca reer Portugal uu la sii joogo kooxdiisa.
Qandaraaska Pepe ee Real Madrid ayaa ku eg dhamaadka xiliciyaareed kan, waxaana doonaya kooxo ay hor boodayso Manchester United.
Balse tababare Zidane ayaa sheegay in Pepe uusan meelna uga socon Real Madrid, wuxuuna si maldahan u muujiyay inuu heshiis cusub u saxiixi doono kooxdiisa.
“Pepe? Dabcan waxaan doonayaa inuu sii joogo Real Madrid, su’aalaha ku aadan isaga waa kuwo soo laablaabta xiliciyaareed walba inkasta oo uu 10 sano soo xirnaa funaanada Real” ayuu yiri Zidane ka hor kulanka Sevilla.
“Wuxuu noqday qayb kamid ah taariikhda kooxdaan, muhiimadayda kaliya ee haatan waa sida uu u caawin karo kooxda ilaa dhamaadka xiliciyaareedka, waxba igama galin wararka la sheegayo” ayuu sii raaciyay.
RASMI: Leicester City oo dhamaystirtay saxiixa Wilfred Ndidi
Felipe Melo oo ka tegay Inter dibna ugu laabtay Waddankiisa hooyo ee Brazil